Thwebula Kodi 17 – Vessoft
Zokuham video, Abadlali Media
Kodi – isofthiwe enamandla ukuba uguqule computer yakho esikhungweni media noma ekhaya yaseshashalazini. Kodi kwenza ukudlala amafayela alalelwayo video in takhiwo eziningi, buka izithombe, umsebenzi kanye disk images, ukudlala TV and video ukusakaza, hlola sezulu njll software ikuvumela ukwakha umtapo media futhi bathole amafayela ezigabeni ezahlukene. Kodi kwenza elawulwa kude of the software ngokusebenzisa amadivaysi mobile noma Consol zokulawula akude. Isofthiwe iqukethe amathuluzi amaningi ukulungisa kwenza ukuba bandise amathuba ngokusebenzisa afakelwa ezahlukene.
Ukusekela for eziningi media takhiwo
Playback of amafayela emidya, TV and video Ukusakaza
Umsebenzi nge disk images
Ikhono of ukuphathwa eyihlane
Ubonisa ulwazi mayelana system computer yakho
Amazwana on Kodi:
Kodi Ahlobene software: